मनसुनको पहिलो वर्षामै डुब्यो धनगढी | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home समाचार मनसुनको पहिलो वर्षामै डुब्यो धनगढी
धनगढी, असार ८ गते । यो वर्षको सक्रिय मनसुनको पहिलो वर्षाले नै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका डुबानमा परेको छ । मङ्गलबार बिहान भारी वर्षा भएपछि पानीको उचित निकास नहुँदा धनगढीको अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेका हुन ।
बिहान करिब आठ बजेदेखि झण्डै साढे दुई घण्टा भारी वर्षा हुँदा मुख्य सडक नै खोला बनेको थियो । वर्षाको पानीले धनगढीको हसनपुर स्थित ऐश्वर्य विद्या निकेतन आसपास क्षेत्र, पार्कमोड क्षेत्र, विशालनगर, एलएन चौक, भन्सार रोड लगायतको क्षेत्रमा डुबान परको थियोे । वर्षाका कारण जिल्ला विकास समिति, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालय पनि डुबेको थियो ।
धनगढीको मुख्य सडक जलमग्न भएपछि बिहान आवत जावतमा समस्या भएको थियो । बिहानै विद्यालय पुगेका विद्यार्थीहरु बिदा भएपछि सास्ती भोगेका थिए । खोलानाला अतिक्रमणका कारण पानीको राम्रो निकास नहुँदा हरेक वर्ष धनगढी डुब्दै आएको छ । हसनपुर क्षेत्रमा लाखौं खर्च गरेर तेस्रो पटक बनाएको नाली प्राविधिक त्रुटिका कारण पानी निकास हुन नसकेको हसनपुरबासी कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो । उहाँले सडक भन्दा नाली अग्लो भएका कारण सडक नै नाला बनेको आरोप लगाउनुभयो ।
वर्षाका कारण जलमग्न सडकमा छाता ओडेर विद्यालयबाट फर्किदैं विद्यार्थी ।तस्बिर: अविनाश चौधरी
यसैबीच, कैलालीको भजनीमा मङ्गलबार चट्याङ लागेर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । अन्य छ जना घाईते भएका छन् । भजनी–त्रिशक्ती नगरपालिका वडा नम्बर ७ मिलनपुर बस्ने ७ वर्षीया करुणा बुढाको ज्यान गएको हो । बुवासँग खेतमा रोपाई हेर्न गएकी उनलाई चट्याङ लागेको प्रहरीले जनाएको छ । चट्याङ लागेर घाईते बालिकाको भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकोे केन्द्रका डा. उमाकान्त तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
भजनी–त्रिशक्ती नगरपालिकामा एकैदिन वडा नम्बर ४, ५ र ७ मा गरी तीन ठाउँमा चट्याङ परेको थियो । चट्याङ लागेर घाईते भएका अन्य तीन जनालाई भजनीमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि कोहलपुर रिफर गरिएको डा. तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।